Simba Tool, Sander Machine, polishing Machine - Yushen
Nyanzvi yemagetsi maturusi mutengesi
Twiza Drywall Sander
750W Drywall Sander Led Chiedza Wall Putty Polisher -KM1801
Chiedza uremu Pfupi Bata Magetsi Drywall Sander Ine LED mwenje 710W -KM1803
Handheld Electric Drywall Sander Ine LED mwenje 750W -KM1802
Magetsi Drywall Sander Yakanakira Imba DIY uye Kushongedza- KM2301-A
800W 225MM Electric Drywall Sander Ine Sanding Zvishandiso- KM2301
Foldable LED Magetsi Drywall Sander ine Vacuum Attachment- KM2304
Ningbo Yushen Trading Co., Ltd. yakavambwa muna 2014, inyanzvi inyanzvi dzemagetsi ekushandisa muChina, ichibatanidza kugadzira nekutengesa. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanaka mumisika yemhiri kwemakungwa. Nekuda kwezvinodiwa zvekuongorora nekusimudzira, muna 2017, takaunganidza vashandi veR & D nevashandi vane hunyanzvi kuti vawane Ningbo Coman Electric Tools Co., Ltd., inyanzvi mukugadzira drywall sanders. Isu tanga tichitevedzera mutemo we "mhando yekutanga, mutengi kutanga".
Zvishandiso zvemagetsi zvehunyanzvi
Chii chinonzi drywall sander?
Drywall Sander muchina wakakurumbira pakati pevashandi vekuvandudza imba. Chishandiso ichi chinoshandiswa kukwenenzvera nzvimbo dzakaoma kuita kuti nzvimbo yacho igadzirire kudhindwa uye kupendwa. Smoothing drywall ibasa rinosanganisira kuiswa kwezvikamu zvitatu zvekupurasita. Mushure mekushandisa ...
Nzira yekugadzira jecha Drywall?
Tichifunga kuti iwe uchashandisa simba sander, pano, ini ndicharatidza matanho ekuita jecha drywall nenzira kwayo. Danho 1: Kutanga iwe unoda kuvhara imba yose nepurasitiki kuitira kuti fenicha uye pasi zvidzivirirwe kubva paupfu. Danho rechipiri: Dzima air conditioner/fan. Zvichadzivirira kuti...
Nzira yekusarudza yakanaka drywall Sander
Paunenge wagadzirira kutanga kushongedza, imwe yemaitiro makuru anoitwa kuita jecha kuti uwane madziro akatsetseka. The turusi rinoshandiswa ichi ndicho drywall sander uye uchanyatsoda akakodzera basa iri.Kune zvakawanda zvakasiyana mhando dzavo, uye kunhonga yakarurama fo...
unogona kutibata pano
SUPPORT & RUBATSIRO
NHAU DZEDU DZEKUGARA